Ebɛnadze na Ibenya wɔ Jehovah Adasefo Christianfo Nhyiamu Ahorow Ase?
Nyimpa pii egyaa asɔr kɔ osiandɛ wonnya asetsena mu nsɛmbisa a no ho hia no ho mbuae anaa awerɛkyekyer biara. Naaso, ebɛnadze ntsi na ɔwɔ dɛ ekɔ Christianfo nhyiamu a Jehovah Adasefo ahyehyɛ no ase? Ebɛnadze na ibenya wɔ hɔ?
Ibenya enyigye dɛ ewɔ nyimpa a wɔwɔ dɔ na wɔdwen afofor ho mu. Wɔ afeha a odzi kan no mu no, wɔhyehyɛɛ Christianfo no yɛɛ hɔn asafo ahorow, ma wɔyɛɛ nhyiamu ahorow dze soom Nyankopɔn, dze sũaa Kyerɛwnsɛm no, na wɔhyehyɛɛ hɔnho nkuran. (Hebrewfo 10:24, 25) Sɛ nna wohyia mu a, ɔdɔ a wɔwɔ ma hɔnho ntsi wɔtse nkã dɛ wɔkã anyɛnkofo mapã ho, kyerɛ dɛ hɔn sunsum afamu enuanom. (2 Thessalonicafo 1:3; 3 John 14) Yedzi afeha a odzi kan Christianfo no nhwɛdo ekyir na yenya hɔn enyigye no bi.
Ibenya mfaso efi Bible ngyinadosɛm a ibosũa dɛ edze bɛyɛ edwuma no mu. Dɛ mbrɛ wɔakã ho asɛm wɔ Bible no mu no, nna mbanyin, mbasiafo, nye mbofra nyinara dzi ehyia. Akyerɛkyerɛfo a hɔnho akokwaa dze Bible no boa hɛn ma yehu mbrɛ yebesi dze Bible ngyinadosɛm no abɔ hɛn bra wɔ hɛn dabiara da asetsena mu. (Deuteronomy 31:12; Nehemiah 8:8) Obiara botum dze noho ahyɛ ndwontow nye dwumadzi n’afã ahorow bi mu, na wɔma kwan ma yɛpaa mu kã hɛn Christianfo enyidado ho asɛm.​—Hebrewfo 10:23.
Ibenya nhyira a ɔnye dɛ wo gyedzi wɔ Nyankopɔn mu bɛyɛ dzen. Ɔsomafo Paul kãa kyerɛɛ asafo kor bi a nna ɔwɔ n’aber do no dɛ; “Na m’enyi gyina dɛ muhu hom, . . . ɔnye dɛ, yɛnam homankasa hom gyedzi na emi medze so do hɛn nyina eenya awerɛkyekyer wɔ hom mu.” (Romefo 1:11, 12) Hɛn mfɛfo agyedzifo a yɛnye hɔn taa bɔ wɔ nhyiamu ahorow ase no hyɛ hɛn gyedzi nye hɛn bo a yeesi dɛ yɛdze Bible ngyinadosɛm bɔbɔ hɛn bra no mu dzen.
Ebɛnadze ntsi na woarankasa mmbɔhwɛ dza yɛakã yi wɔ hɛn asafo nhyiamu a odzi hɔ no ase? Sɛ eba a, yɛbɛgye wo fɛw do. Wonntua sika biara wɔ hɛn nhyiamu ahorow no ase, na wɔnngyegye kɔlɛhyɛn biara so wɔ hɔ.
Ebɛn nhwɛdo na hɛn asafo nhyiamu ahorow no dzi ekyir?
Ebɛn mfaso na yebenya efi Christianfo nhyiamu ahorow yi ase a yɛbɔkɔ no mu?
YƐ NHWEHWƐMU AFOFOR
Sɛ epɛ dɛ ihu mbrɛ Ahendzi Asa a ɔwɔ w’apaamu hɔ no mu tse ansaana aba hɛn nhyiamu no mu kor a, bisa Jehovah Adasefo no mu bi ma ɔnkɛkyerɛ wo mbrɛ Ahendzi Asa no mu tse.
Ebɛnadze Na Ɔkɔ Do Wɔ Hɛn Ahendzi Asa Do?
Woara ankasa bɔ mbɔdzen bra na bɔhwɛ dza ɔkɔ do wɔ hɔ.
Jehovah Adasefo Asafo Nhyiamu Ahorow
Hwehwɛ bea nye ɔkwan a yɛfa do som.